Obere afọ ice: ihe ọ bụ, mgbe ọ mere na ọ kpatara | Network Meteorology
Portillo nke German | 30/03/2021 10:49 | Nkewa
Otutu n’ime anyi amatala oge otutu otutu otutu otutu otutu ugbua emeela na uwa. Agbanyeghị, taa, anyị ga-ekwu maka ya obere afọ akpụrụ. Ọ bụghị ihe zuru ụwa ọnụ mana ọ bụ oge glaciation dị ala akara site na mgbasa nke glaciers na oge a. O mere n’agbata narị afọ nke 13 na 19, ọkachasị na France. Ha bụ otu n'ime mba ndị kachasị ata ahụhụ ụdị ụdị okpomọkụ a. Ọnọdụ oyi a wetara ụfọdụ nsonaazụ na-adịghị mma ma mee ka mmadụ gbanwee ọnọdụ ọhụrụ gburugburu ebe obibi.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara obere ice ice na mkpa ọ nwere.
1 Obere afọ ice
2 Ọmụmụ banyere obere Ice Ice
4 Oge oge Ice
Ọ bụ oge ihu igwe oyi nke mere na Europe na North America site n'afọ 1300 ruo 1850. O kwekọrọ na oge mgbe ọnọdụ okpomọkụ ahụ dị ọtụtụ opekempe na ọkara ọkara dị ala karịa nke nkịtị. Na Europe ihe a sochiri ihe ubi, ụnwụ nri na ọdachi ndị na-emere onwe ha. Ọ bụghị naanị na ọ mere ka oke mmiri ozuzo dị elu n'ụdị snow, kamakwa ọ belata ọnụ ọgụgụ ihe ọkụkụ. Ekwesiri iburu n'uche na teknụzụ dị na gburugburu ebe a abụghị otu ọ dị taa. Ugbu a anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ iji nwee ike belata ọnọdụ ọjọọ ndị enyere anyị n'ọnọdụ ndị a.
Oge mmalite nke obere afọ ice bụ ihe edoghị anya. O siri ike ịmata mgbe ihu igwe na-amalite ịgbanwe na-emetụta. Anyị na-ekwu maka ihu igwe ịbụ mkpokọta nke data niile enwetara n’elu oge na mpaghara. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị na-anakọta mgbanwe niile dịka okpomọkụ, ọnụọgụ nke radieshon, ọchịchị ikuku, wdg. Anyị tinye ya na oge, anyị ga-enwe ihu igwe. Njirimara ndị a na-agbanwe kwa afọ ma ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-adịgide adịgide. Mgbe anyị na-ekwu na ihu igwe bụ nke otu ụdị, ọ bụ n'ihi na ọtụtụ oge ọ dabara na ụkpụrụ nke mgbanwe ndị dabara n'ụdị a.
Otú ọ dị, okpomọkụ anaghị adịgide adịgide ma kwa afọ ha na-adị iche. Ya mere, o siri ike ịmata nke ọma mgbe ọ bụ mmalite nke obere oge ice. N’iburu ihe isi ike dị n’echiche oge ndị a oyi na-atụ, njedebe nke obere afọ ice na-adị iche n’etiti ọmụmụ a pụrụ ịchọta banyere ya.
Ọmụmụ banyere obere Ice Ice
Nnyocha nke Laboratory nke Glaciology na Geophysics nke Environment nke Mahadum Grenoble na nke Laboratory nke Glaciology na Geophysics nke Environment nke Polylọ Akwụkwọ Federal Polytechnic nke Zurich, na-atụ aro na mgbatị glacial bụ n'ihi mmụba dị ukwuu na ọdịda, mana ka ọ dị ịrịba ama na okpomọkụ.
N'ime afọ ndị a, ọganihu nke glaciers bụ n'ihi mmụba nke ihe karịrị 25% nke snowfall n'oge oyi. N'oge oyi ọ bụ ihe nkịtị maka inwe ọdịda n'ụdị snow n'ọtụtụ ebe. Agbanyeghị, na nke a, ugwu ndị a malitere ịbawanye ruo n'ókè nke na ha dị na mpaghara ebe snow na-adabaghị na mbụ.
Kemgbe njedebe nke obere Ice Ice, ịla ezumike nke glaciers abụwo ihe na-aga n'ihu. All glaciers enwekwaghị ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ngụkọta olu ha na nkezi ọkpụrụkpụ belata site na 30 centimeters kwa afọ n'oge a.
Ka anyị lee ihe ndị nwere ike ime obere ice afọ. Enweghi otutu nkwekorita nke sayensi banyere ubochi na ihe ndi puru ime ka oge oria a. Ihe na-akpata ya pụrụ ịbụ n’ihi ntakịrị radieshon nke na-ada n’elu ụwa. Ọnọdụ a dị ala nke ụzarị anyanwụ na-eme ka ihe dị jụụ nke mbara ala dum na mgbanwe nke ike ikuku. N'ụzọ dị otú a, ọdịda dị n'ụdị snow na-apụta ugboro ugboro.
Ndị ọzọ na-akọwa na ihe ịtụnanya nke obere afọ ice bụ n'ihi mgbawa ugwu na-agbachi ọchịchịrị ntakịrị. N'okwu ndị a, anyị na-ekwu maka ihe yiri nke ahụ dị n'elu mana o nwere ihe ọzọ dị iche. Ọ bụghị na obere radieshon nke anyanwụ na-abịa site na anyanwụ, mana ọ bụ ọchịchịrị nke ikuku na-akpata mbelata radieshon nke anyanwụ na-emetụta elu ụwa. Fọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na-agbachitere echiche a na-ekwusi ike na n’agbata afọ 1275 na 1300, nke bụ mgbe obere ice malitere, 4 mgbawa ugwu mgbawa n'ime oghere nke afọ iri ise ga-akpata ọrụ a maka na ha niile mere n'oge ahụ.
Ugwu mgbawa na-egosipụta ụzarị ọkụ nke anyanwụ n’ụzọ na-adigide ma na-ebelata oke okpomọkụ nke elu ụwa natara. Nationallọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na United States (NCAR) ewepụtawo usoro ihu igwe iji nwalee mmetụta nke mgbawa ugwu ugboro ugboro, n'ime afọ iri ise. Ngụkọta nke mgbawa ugwu a na ihu igwe na-akwado nsonaazụ niile nke mgbawa ugwu ugboro ugboro. Ihe ndị a niile na-eme ga-amụ obere Ice Age. Igwe nju oyi, mmụba nke mmiri n'oké osimiri, mgbanwe nrugharị mmiri, na iwetulata ebufe ụgbọ mmiri gaa n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic nwere ike ịbụ ihe ndapụta maka Little Ice Age.
Oge oge Ice
Agbanyeghị, ekwesiri iburu n'uche na ike obere oge ice agaghị atụnyere oge ndị ọzọ dị ogologo ma sie ike nke mbara ụwa anyị nwerela n'ogo glaciation. A maghị ihe na-akpata ọdachi ihu igwe nke ọma mana mgbe ihe a mechara na mgbe ihe ntule multicellular pụtara. Nke a pụtara na n'ogo evolushọn, afọ ice nke mere n'ụwa anyị afọ 750 nde gara aga nwere ike ịdị mma.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere obere afọ ice na njirimara ya.
Nwere ọdụ ọdụ ihu igwe?
Y’oburu n’inwe obi uto banyere uwa meteoroloji, nweta otu n’ime igwe onodu ubochi ihu igwe nke anyi n’acho aro were rite uru na onyinye di:
Stationslọ ọrụ gbasara ihu igwe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Obere afọ ice